१० लाख ४४ हजार विद्यार्थी हराए महोदय ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
१० लाख ४४ हजार विद्यार्थी हराए महोदय !
जेठ ३० गते, २०७६ - २०:२९
काठमाडाैं । ०६४ सालमा एक कक्षामा १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी भर्ना भए । अहिले ०७६ सालमा १२ कक्षाको परीक्षा दिंदै गर्दा २ लाख ९० हजार मात्रै बाँकी भए । १० लाख ४४ हजार विद्यार्थी हराए । विद्यालयमा नटिक्ने विद्यार्थी कसका छोरा छोरी हुन् ? तपाईं हाम्रा पक्कै होइनन् । जो विद्यालयमा टिकेका छन् उनले कति सिके भनेर हेर्यौं भने सरकार भन्छ, कुनै पनि विद्यार्थीले ५० प्रतिशतभन्दा बढि सिकेन । अझ अंग्रेजी, गणीत र विज्ञानको विषय हेर्यौं भने त्यो भन्दा धेरै तल छ । यो नसिक्ने विद्यार्थीहरु कसका सन्तान हुन् ?
देशमा ३६ हजारभन्दा बढि प्रारम्भिक वाल विकास केन्द्रहरु छन् । योग्य शिक्षकबाट पढाउनु पर्ने ठाउँमा ८ कक्षा पास गरेकोले ६ हजार रुपैयाँभन्दा कममा यी विद्यालयमा पढाइन्छ । यी विद्यालयमा पढ्ने नानीबाबू कसका छोरा छोरी हुन् ? हामीले आफैंले लेखेको संविधानले यस्तो गर्न पाईंदैन भनेको छ । लेखेको कुरा जे छ त्यो हामी गरिरहेका छैनौं । यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
हामी सबैले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कांग्रेसले, हिजोको एमाले, हिजोको माओवादीलगायत सबैले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । र, यसलाई बदल्ने काम पनि हामी आफैंले गर्नुपर्छ । तर जे गरिरहेका छौं त्यो गरेर भएको अवस्था बदलिन्न ।
हामी सार्वजनिक मञ्चमा सबैभन्दा सजिलो गरि निजी विद्यालयलाई २/४ वटा गाली गर्छौं, दाग अनुहारमा छ अनि ऐना खोज्ने काम गर्छौं । हामी आफैंले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा न प्रध्यानाध्पक, न शिक्षक, न हामी आफैं सांसद कोही पढाउन तयार छैनौं । किन यस्तो भएको हो ?
यो विषयमा अध्ययन पनि भएको छ । भर्खरै शिक्षा मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन पनि गरेको छ । त्यो अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले लगिसकेपछि आजसम्म शिक्षा मन्त्रालयले फिर्ता माग्ने आँट गरेको छैन् ।
आधारभूत विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको रुपमा बाँडफाँड गरेका छौं । स्थानीय सरकारको अधिकार एकपछि अर्को खोसेर लिएर गएको छ । प्रतिवेदनले शिक्षकको बारेमा विस्तृत रुपमा बताएको छ । सर्लाहीमा ८३ जना विद्यार्थीलाई एक जना शिक्षक हुँदै गर्दा भक्तपुरमा १७ जना विद्यार्थीको लागि एकजना शिक्षक छ ।
२९ हजार विद्यालय मध्ये २० हजार विद्यालयमा पूर्वाधारको विजोग छ । गुणस्तर भनेको केवल हामीले अंग्रेजी भाषा भन्ने बुझेका छौं । यस्तोमा शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको बजेट हेर्यौं भने आजको आधारभूत शिक्षामा जति बजेट छुट्याएको छ, यो पैसाले १ चौथाई विद्यार्थीमा पनि पुग्ने अवस्था छैन् । एकमुष्ट अनुदान ४ सय विद्यालयलाई दिने भनेको गएको दुई वर्षमा पनि एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन् । यो वर्ष के हुन्छ प्रष्ट छ ।
राष्ट्रपति सुधार कार्यक्रमको अवधारणामा खेलकुद शिक्षकसँग राख्ने भनिएको छ । जसमा ५ अरब छुट्याइएको छ । जुन एउटा विद्यालयको भागमा जम्मा १ लाख ३२ हजार पर्छ । त्यसबाट दलित अपाङ्ग भएको विद्यार्थीको हकमा प्रतिमहिना जम्मा ८५ रुपैयाँ पर्छ । एक दिनको खाजा भत्ता कति लाग्छ ? मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटमा बच्चाले दिनको ११ रुपैयाँ पाउँदैछ ।
शिक्षकको अवस्था हेर्दा ६३ हजार शिक्षकको पद रिक्त छ । शिक्षकको यस्तो अवस्था भईरहेको अवस्थामा कुनै अवधारणा नै नभएको स्वंय सेवक शिक्षक भनेर ५ अर्ब छुट्याइएको छ । यो बजेटबाट हामीले पुग्न खोजेको कहाँ हो ?
हाम्रो विश्वविद्यालयको सिस्टममा ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने भनेर छलफल गर्नुपर्ने बेलामा हामी फेरि छाता ऐन भन्दैछौं । दशौं योजनादेखि छाता ऐन भन्न थालिएको हो । के हो छाता ऐन ? छाता ऐन ल्याउने हो भने अहिले फेरि नयाँ विश्वविद्यालयको प्रस्ताव किन लिएर आएको ? के नयाँ विश्व विद्यालयको बारेमा अध्ययनको भएको छ ? डिपिआर तयार भएको छ ? यो बजेटबाट एक रुपियाँ पनि खर्च गर्ने अवस्था छैन् ।
नामको बारेमा होइन् । सम्मानित नेताको नाम अहिले भएको विश्वविद्यालयमा राखिदिने कुरामा कुनै आपत्ति गर्नुपर्ने छैन् । तर यस्तो अवस्था किन बनाउँदैछौं ? विश्व विद्यालयको बारेमा यति धेरै अध्ययन भईसकेपछि पनि कुनै पनि कुराको सुधार गर्न सरकार किन तयार भएको छैन् ? गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा धेरै कुरा गर्ने भनिएको छ तर, कुनैपनि विषयमा खर्च गर्ने भनिएको बजेटले पुर्याउँदैन ।
(बजेटमाथि सदनमा भएको छलफल क्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य एंव छाँया सरकारका शिक्षा मन्त्री गगन थापाले शिक्षा क्षेत्रमा बिनियोजित बजेटको विषयमा आधारित रहेर व्यक्त गरेको विचार जस्ताको तस्तै)
जेठ ३० गते, २०७६ - २०:२९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका मेचिनगर ईन्चार्ज यामकुमार गिरी पक्राउ परेका...
काठमाडौं । चितवन, काठमाडौं, कैलाली, बाँके, सप्तरी, झापा, बारा, सुनसरी र कैलालीमा भएका छुट्टाछुट्टै सवारी...
दिल्लीको झोला उद्योगमा भीषण आगलागी, ४३ मजदुरको मृत्यु, दर्जनौं घाईते
काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्लीको रानी झाँसी रोडस्थित एक झोला उद्योगमा भीषण आगालागी भएको छ । आइतबार...
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले यस वर्षको जाडो लाई लक्षित गर्दै तात्तातो हिटरनेट...
रारा तालमा पनि टेलिकमकाे फोरजी सेवा
काठमाडाैं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल तथा कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीयस्थलका रुपमा रहेको रारामा...
अमेरिकामा यौन शोषण र बलात्कारको मुद्दा बढ्दो, एक वर्षमा ६ हजारभन्दा बढि मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । अमेरिकामा पछिल्लो समय यौन शोषण तथा बलात्कारको मुद्दाहरुमा बढोत्तरी आएको छ । अन्तराष्ट्रिय...
टाट पल्ट्यो भारतीय विमान कम्पनी एयर इण्डिया, बेच्ने तरखरमा मोदी सरकार
काठमाडौं । भारतको सरकारी एयरलाईन्स कम्पनी एयर इण्डिया धराशाही बन्दै गएको छ । बितेको आर्थिक वर्ष (२०१८/०१९)मा...
अर्थमन्त्री खतिवडासहित १९ जनाकाे २ वर्षे कार्यकाल सकियाे, नयाँ निर्वाचनकाे तयारीमा आयोग
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलसँग सोमबार छलफल गर्ने...
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति छ आज सुनको मुल्य ?
काठमाडौं । निरन्तर रुपमा घटबढ हुँदै आएको सुनको मूल्य २ दिनदेखि यता घट्दै आएको छ । बिहीबार छापावाला...
अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज...
भारतको प्रष्ट रणनीति : सके एकैपटक, नसके किस्ताबन्दीमा भएपनि नेपाललाई गाभ्ने
राष्ट्रियता जोगाउने प्रश्न, के राष्ट्रवादीबीच एकता हुनु पर्दैन् ?
कांग्रेसका २१ आरोपका २१ जवाफ र एक सुझाव
अंग्रेजको उपेक्षामा रहेको थियो लिम्पियाधुरा
सीमा विवादलाई अन्तराष्ट्रिकरण गर्ने बेला आएको छैन
दक्षिण एसियाको बढ्दो रणनीतिक महत्व
हेपाहा छिमेकी अनि लम्पट सरकार
भारत जाँदा चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्ने र चीन जाँदा भारतको कार्ड प्रयोग गर्ने शैली गलत : राजेन्द्र श्रेष्ठ
मन्त्री लालबाबुलाई एक उपसचिवको खुलापत्र : म कहिलेसम्म अन्यायमा पर्ने ?
सी विचारधारा र नेकपाको प्रशिक्षण कार्यक्रम
चीनको विकासबाट नेपालले के सिक्न सक्छ ?
सी जिनफिङ विचार र बिआरआई : के नयाँ विश्व व्यवस्था बन्दैछ ?
सम्पादकीय : भट्टराईमाथिको दुव्र्यवहार, अराजकताको पराकाष्ठ !
को हुन् कार्ल मार्क्स, के हो मार्क्सवाद?